Good Communication Skills - Key to Any Success - Motivsuccess
- July 8, 2019August 8, 2019 - The Khant
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေ။ ဒီနေ့မှာတော့ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ့် အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိက သော့ချက်ဖြစ်တဲ့ “ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ခြင်း” အကြောင်း တင်ပြသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်ဆံရေးက အလွန်အရေးပါပါတယ်။
ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ခြင်းက ဘဝ အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကပါပဲ။ ထိရောက်စွာ ပြောဆို မဆက်သွယ်နိုင်ရင် နားလည်မှုလွဲတာတွေ၊ လွဲမှားဖော်ပြတာတွေ စတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အမှားတွေလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိရောက်စွာ ပြောဆို ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းက အရေးကြီးပါတယ်။
“ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း” ဆိုတာကတော့ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး (သို့) လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အကြောင်းအရာ၊ သတင်း စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖလှယ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အတွေးတွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သူများ နားအလည်ဆုံး၊ အရှင်းလင်းဆုံးနဲ့ အတိကျဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစား ပြောဆိုကြပါတယ်။
ပြောဆိုဆက်က်ဆံရေးတစ်ခု အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ နားထောင်သူက ပေးပို့သူ(ပြောဆိုသူ) ရဲ့ အချက်အလက်အတိုင်း တူညီစွာနားလည်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိခြင်းက အလုပ်မှာရော၊ လူမှုရေးနဲ့ Relationship မှာပါ ပိုပိုပြီး အရေးကြီးလာပါပြီ။
ပြောဆိုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည် မြှင့်တင်ဖို့အတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက် (၃) ချက်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို မိမိကိုယ်တိုင် နားလည်အောင် လုပ်ပါ။
ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနားလည်ထားရပါမယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်က ဘယ်သူနဲ့ ပြောရမှာလဲ? စတဲ့ စကားပြောတဲ့ အချိန်မှာ ရှိနိုင်တဲ့ အတားအဆီးတွေ (ဘာသာစကား အခက်အခဲ၊ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားခြင်း) စတာတွေကို ကြိုတင်စဉ်းစားပြီး ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လို ရလဒ်မျိုးလိုချင်တာလဲ ဆိုတာကိုလည်း မိမိလိုချင်တဲ့ ရလဒ်ရအောင် ပြောဆိုနိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပြောဆို ဆက်ဆံရေးမှာ အမြဲတမ်း ဘာပြောမှာလဲ ဆိုတာက အရေးအကြီးဆုံး မဟုတ်ပါဘူး။ “ဘယ်လိုပြောမှာလဲ” ဆ်ိုတာကလည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။ ကဲ .. ဒါဆိုရင် ဘယ်လို ပြောကြမလဲ? ပထမဆုံး အနေနဲ့ ပြောမယ့်သူနဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆုံအောင်ကြည့်ပါ။ နားထောင်သူကို ကြည့်ပြီး စကားပြောတဲ့အခါ ကိုယ့်မျက်လုံးမှာ နားထောင်သူအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှု ပေါ်လွင်ပါစေ။ ဒုတိယအနေနဲ့ မိမိရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို သတိမူသင့်ပါတယ်။ လက်ပိုက်ပြီး ကိုယ်နေဟန်ထား ကိုင်းကိုင်းကြီး ဖြစ်နေတာက ပြောနေတဲ့သူအပေါ် စိတ်မဝင်စားသလို မပြောချင်သလို ထင်စေပါတယ်။ ကိုယ်နေဟန်ထား မတ်မတ်နေပြီး လက်တွေကို ဘေးနှစ်ဖက်မှာ ချထားတဲ့ ပုံစံက သင့်ကို ချဉ်းကပ်ရလွယ်ကူပြီး ပြောဆိုဆက်သွယ်ရတာ ကောင်းတဲ့သူ ပုံစံပေါ်စေမှာပါ။ ကိုယ်နေဟန်ထားကလည်း ပြောဆိုဆက်သွယ်ရေးမှာ အရေးပါလှပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြောဆိုရာမှာလည်း ဝေဖန်မှုကင်းပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်မပြောဖို့လည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။
ပြောဆိုဆက်ဆံရေးဆိုတာ နှစ်လမ်းသွားပါ။ ကိုယ်ပြောရမယ့်ဟာ ပြောပြီးသွားပြီဆိုရင် ရပ်ပြီး တုံ့ပြန်ချက်တွေကို နားထောင်ပါ။ မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပါ။ မေးခွန်းမေးတဲ့ သူကိုလည်း တလေးတစားနဲ့ နားထောင်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြေပေးပါ။ ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်လားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့အတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် မေးခွန်းတွေကို မေးခြင်းအားဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရေး စွမ်းရည် တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီ အချက် (၃) ချက်ကတော့ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး (၃) ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိတဲ့ သူတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ပေါများပြီး ရည်မှန်းချက်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးက သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ခင်ဗျ။
Motivsuccess မှာ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း တင်ပေးမှာ ဖြစ်တာကြောင့် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှုပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း အောင်မြင်မှုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ ဖတ်ရှုအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
မင်ျဂလာပါ သူငယျခငျြးတို့ရေ။ ဒီနမှေ့ာတော့ အားလုံးအတှကျ အသုံးဝငျမယျ့ အောငျမွငျမှုအတှကျ အဓိက သော့ခကျြဖွဈတဲ့ “ကောငျးမှနျစှာပွောဆိုဆကျဆံနိုငျခွငျး” အကွောငျး တငျပွသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အားလုံးရဲ့ နစေ့ဉျဘဝမှာ တဈဦးနဲ့ တဈဦး ပွောဆိုဆကျဆံရေးက အလှနျအရေးပါပါတယျ။
ကောငျးမှနျစှာ ပွောဆိုဆကျဆံနိုငျခွငျးက ဘဝ အောငျမွငျမှုအတှကျ အဓိကပါပဲ။ ထိရောကျစှာ ပွောဆို မဆကျသှယျနိုငျရငျ နားလညျမှုလှဲတာတှေ၊ လှဲမှားဖျောပွတာတှေ စတဲ့ ကွီးမားတဲ့ အမှားတှလေညျး ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ထိရောကျစှာ ပွောဆို ဆကျဆံနိုငျခွငျးက အရေးကွီးပါတယျ။
“ပွောဆိုဆကျဆံခွငျး” ဆိုတာကတော့ လူတဈဦးနဲ့ တဈဦး (သို့) လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာ အကွောငျးအရာ၊ သတငျး စတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ဖလှယျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုလုပျရာမှာ ကြှနျတျောတို့ဟာ အတှေးတှေ၊ ရညျရှယျခကျြတှေ၊ စတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို သူမြား နားအလညျဆုံး၊ အရှငျးလငျးဆုံးနဲ့ အတိကဆြုံးဖွဈအောငျ ကွိုးစား ပွောဆိုကွပါတယျ။
ပွောဆိုဆကျကျဆံရေးတဈခု အောငျမွငျတယျဆိုတာ နားထောငျသူက ပေးပို့သူ(ပွောဆိုသူ) ရဲ့ အခကျြအလကျအတိုငျး တူညီစှာနားလညျတာကို ဆိုလိုတာပါ။ သတငျးအခကျြအလကျနဲ့ နညျးပညာတိုးတကျလာတဲ့ ခတျေကွီးမှာ ကောငျးမှနျစှာ ပွောဆိုဆကျဆံနိုငျတဲ့ စှမျးရညျရှိခွငျးက အလုပျမှာရော၊ လူမှုရေးနဲ့ Relationship မှာပါ ပိုပိုပွီး အရေးကွီးလာပါပွီ။
ပွောဆိုဆကျဆံရေးစှမျးရညျ မွှငျ့တငျဖို့အတှကျ အောကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ အခကျြ (၃) ခကျြကို သတိပွုသငျ့ပါတယျ။
၁။ ကိုယျပွောခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာကို မိမိကိုယျတိုငျ နားလညျအောငျ လုပျပါ။
ကိုယျပွောခငျြတဲ့ အကွောငျးနဲ့ ရညျရှယျခကျြကို မိမိကိုယျတိုငျ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိနားလညျထားရပါမယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျက ဘယျသူနဲ့ ပွောရမှာလဲ? စတဲ့ စကားပွောတဲ့ အခြိနျမှာ ရှိနိုငျတဲ့ အတားအဆီးတှေ (ဘာသာစကား အခကျအခဲ၊ ယဉျကြေးမှု ကှဲပွားခွငျး) စတာတှကေို ကွိုတငျစဉျးစားပွီး ပွငျဆငျထားသငျ့ပါတယျ။ ဘယျလို ရလဒျမြိုးလိုခငျြတာလဲ ဆိုတာကိုလညျး မိမိလိုခငျြတဲ့ ရလဒျရအောငျ ပွောဆိုနိုငျဖို့ ကွိုတငျပွငျဆငျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ပွောဆို ဆကျဆံရေးမှာ အမွဲတမျး ဘာပွောမှာလဲ ဆိုတာက အရေးအကွီးဆုံး မဟုတျပါဘူး။ “ဘယျလိုပွောမှာလဲ” ဆိုတာကလညျး အရေးကွီးပါသေးတယျ။ ကဲ .. ဒါဆိုရငျ ဘယျလို ပွောကွမလဲ? ပထမဆုံး အနနေဲ့ ပွောမယျ့သူနဲ့ မကျြလုံးခငျြး ဆုံအောငျကွညျ့ပါ။ နားထောငျသူကို ကွညျ့ပွီး စကားပွောတဲ့အခါ ကိုယျ့မကျြလုံးမှာ နားထောငျသူအပျေါ ယုံကွညျစိတျခမြှု ပျေါလှငျပါစေ။ ဒုတိယအနနေဲ့ မိမိရဲ့ ကိုယျနဟေနျထားကို သတိမူသငျ့ပါတယျ။ လကျပိုကျပွီး ကိုယျနဟေနျထား ကိုငျးကိုငျးကွီး ဖွဈနတောက ပွောနတေဲ့သူအပျေါ စိတျမဝငျစားသလို မပွောခငျြသလို ထငျစပေါတယျ။ ကိုယျနဟေနျထား မတျမတျနပွေီး လကျတှကေို ဘေးနှဈဖကျမှာ ခထြားတဲ့ ပုံစံက သငျ့ကို ခဉျြးကပျရလှယျကူပွီး ပွောဆိုဆကျသှယျရတာ ကောငျးတဲ့သူ ပုံစံပျေါစမှောပါ။ ကိုယျနဟေနျထားကလညျး ပွောဆိုဆကျသှယျရေးမှာ အရေးပါလှပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပွောဆိုရာမှာလညျး ဝဖေနျမှုကငျးပွီး ဆနျ့ကငျြဘကျမပွောဖို့လညျး အရေးကွီးပါသေးတယျ။
ပွောဆိုဆကျဆံရေးဆိုတာ နှဈလမျးသှားပါ။ ကိုယျပွောရမယျ့ဟာ ပွောပွီးသှားပွီဆိုရငျ ရပျပွီး တုံ့ပွနျခကျြတှကေို နားထောငျပါ။ မေးတဲ့ မေးခှနျးတှကေို ဂရုတစိုကျနားထောငျပါ။ မေးခှနျးမေးတဲ့ သူကိုလညျး တလေးတစားနဲ့ နားထောငျပွီး အကောငျးဆုံးဖွပေေးပါ။ ပွီးတဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျပွောလိုကျတဲ့အကွောငျးအရာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး နားလညျလားဆိုတာ သိနိုငျဖို့အတှကျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဆှေးနှေးနိုငျမယျ့ မေးခှနျးတှကေို မေးခွငျးအားဖွငျ့ ပွောဆိုဆကျဆံရေး စှမျးရညျ တိုးတကျလာနိုငျပါတယျ။
ဒီ အခကျြ (၃) ခကျြကတော့ ပွောဆိုဆကျဆံရေးအတှကျ အရေးအကွီးဆုံး (၃) ခကျြပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကောငျးမှနျစှာ ပွောဆိုဆကျဆံနိုငျတဲ့ စှမျးရညျရှိတဲ့ သူတှအေတှကျ အခှငျ့အလမျးတှလေညျး ပေါမြားပွီး ရညျမှနျးခကျြတှကေို အောငျအောငျမွငျမွငျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျဖို့ ပိုမိုလှယျကူသှားမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
ဒီဆောငျးပါးလေးက သူငယျခငျြးတို့အတှကျ အသုံးဝငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ ခငျဗြ။
Motivsuccess မှာ သူငယျခငျြးတို့အတှကျ အသုံးဝငျတဲ့ ဆောငျးပါးတှကေို အပတျစဉျ တနင်ျလာနတေို့ငျး တငျပေးမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ စောငျ့မြှျော ကွညျ့ရှုပေးဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။ သူငယျခငျြးတို့လညျး အောငျမွငျမှုတှကေို ဆှတျခူးနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးရငျး နိဂုံးခြုပျပါရစေ။ ဖတျရှုအားပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။